Mpanamboatra ambongadiny Multicolor 13.3 inch Electronic Shelf Label ESL mpanamboatra sy mpamatsy | Zkong
-Ny: Multicolor 13.3 inch Electronic Shelf Label ESL
-Ny haben'ny hafa: 1.54 ″, 2.13 ″, 2.6 ″, 2.7 ″, 2.9 ″, 4.2 ″, 7.5 ″ 11.6 ″
-Seho: fotsy, mainty, mena, mavo, manga, maintso, volomparasy sns
Ny tsindry amin'ny fivarotana dia tsy mitsaha-mitombo. Noho ny filana mampifanaraka ny e-varotra sy ny vidin'ny antsinjarany dia arahana ny haitao vaovao. Ny tombony azo amin'ny fitantanana ny vidiny mavitrika sy feno nefa mampihena ny enta-mavesatra dia miharihary. Azonao atao ny manitsy ny vidiny mora arakaraka ny mpifaninana aminao na mikolokolo fihetsika manokana momba ny fiantsenana.
Ny vidin'ny famaranana dia tsy fironana futuristic fa zava-misy. Ny mpanjifa dia mahazo vidiny isan-karazany amin'ny tolotra mitovy matetika amin'ny alàlan'ny fantsona samihafa. Miantso fitaovana hifehezana sy handrindrana ireo fantsona marobe ireo. Ho fanampin'izany, ny rafitray dia manolotra fiasa marina, fitsitsiana fotoana ary fanatsarana loharano. Ny fanitsiana ny vidin'ny tanana dia mitaky fotoana sy enti-miasa na inona na inona orinasa lehibe, mpivarotra antsinjarany, fivarotana lehibe, fivarotana lamaody na orinasa kely. Manome hery ny tenanao hamindra ireo loharano ireo. Minitra vitsy izao ny fanitsiana ny vidin'ny nomerika amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana elektronika fa tsy ora.
Ny e-varotra dia mampitombo ny tsindry fifaninanana amin'ny mpivarotra ary mitarika fanitsiana matetika ny vidiny. Ny fampisehoana ny vidiny efa lany andro dia matetika mitarika fahaverezan'ny fahatokisana eo imason'ny mpanjifa, izay tsy zakan'ny tompona orinasa amin'ny toekarena ankehitriny. Ny mari-pahaizana vidin'ny elektronika dia manome ny fahafaha-miatrika ireo filàna ireo amin'ny alàlan'ny fahalalahana, famokarana ary ny fametrahana mazava tsara. Ny fanovana ny vidin'ny taratasy nentim-paharazana dia maharitra 3 minitra, izay manampy haingana mandritra ny ora maro mandritra ny ora maro ho an'ny magazay iray manontolo. Ankoatry ny fampiharana ny vidin-javatra miadana kokoa, ny fiakaran'ny vidim-piainana ary ny mety hisian'ny fahadisoana ambonimbony, ny tagan'ny vidin'ny taratasy dia mety hiteraka fako lehibe ihany koa. Noho ny valiny fohy dia azo havaozina mandritra ny ora fiasana ny mari-pamantarana fotoana nefa tsy iharan'izany ny tsy fitovian'ny talantalana sy ny vidin'ny cash register izay mampihena ny taraina.
Andao hampiasa ny mari-pahaizana nomerika hamahana ny olana rehetra ananan'ny tag taratasy mahazatra.